Gacalisada weriye Jamal Khashoggi oo sheegtay in la wareegidda Newcastle United ee Sacuudigu ay “qalbi jab” u tahay iyada. | Dayniile.com
Home Warkii Gacalisada weriye Jamal Khashoggi oo sheegtay in la wareegidda Newcastle United ee...
Gacalisada weriye Jamal Khashoggi oo sheegtay in la wareegidda Newcastle United ee Sacuudigu ay “qalbi jab” u tahay iyada.
Gacalisada weriyihii la dilay ee Jamal Khashoggi ayaa sheegtay in la wareegidda Newcastle United ee uu Sacuudigu taageeray ay “qalbi jab” u tahay iyada.
Khashoggi, oo mucaarad ku ahaa Dhaxal-sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan, ayaa la dilay xilli uu booqanayay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul bishii October 2018.
Ha’adaha sirdoonka reer-galbeedka ayaa aaminsan in dhaxal-suguhu uu amray dilka – taas oo uu beeniyay.
“Aad ayaan u niyad jabsanahay,” ayay tiri Hatice Cengiz, oo ay is guursan rabeen Khashoggi.
Waxa aan sameynayay tan iyo dilkiisii waa inaan caddaalad u raadiyo Jamal maalin walba, fursad walba oo aan helay iyo meel walba oo aan tegi karo.
“Kaddib si deg deg ah, waxaan warka ka arkay oo ay dadku ka hadlayeen la wareegidda waxaana iri ‘fadlan, ha sameyn sidaas, fadlan wax isku fal.”
Horyaalka Ingiriiska ayaa ansixiyay la wareegidda Newcastle oo ay ku baxday lacag dhan £305m kaddib markii Sacuudigu uu u xaqiijiyay inuusan isagu maamuli doonin naadiga.
Hay’adda Maalgashiga Sacuudiga (PIF), ee uu madaxda ka yahay Maxamed bin Salmaan, ayaa lacagta 80% bixineysa waxaana loo arkaa inay ka madax bannaan tahay dowladda.
Dowladda Sacuudiga ayaa lagu eedeeyay tacaddiyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha.
‘Taageerayaasha Newcastle waxaa keliya u daran mustaqbalka dhaqaale ee naadiga’
PIF waxay heystaaa hanti lagu qiyaasay £250bn, taas oo Newcastle ka dhigeysa mid ka mid ah naadiyada ugu taajirsan adduunka, balse Cengiz ayaa sheegtay inay dooneyso in taageerayaasha ay xusuusiso inay jiraan arrimo badan oo ka muhiimsan dhaqaalaha naadiga.
“Waxay u muuqataa in iyagu [taagerayaasha Newcastle] aysan daneyneyn waxa ku dhacay Jamal, waxay keliya daneynayaan mustaqbalka dhaqaale,” ayay tiri Cengiz.
“Waxaan doonayaa inaan xusuusiyo inay jiraan wax ka muhiimsan lacagta, inuu jiro wax aad uga muhiimsan xaaladda dhaqaale ee naadigan.
“Waxaa runtii jira waxyaabo aad uga qiimo badan oo aan heysanno isla markaana aan mar walba nolosheenna ugu baahannahay.
“Waa inaad u dirtaan farriin ah inaysan iibsan karin naadi Ingiriis ah sababo la xiriira dembigan – waa farriinta cad ee ay tahay in qof walba oo Ingiriis ah uu u diro iyaga.”
Waxay intaas ku dartay: “Waa inaan xusuusinnaa waxa ay ku sameeyeen Jamal, sababtoo ah cidna looma soo qaban, marka waa inaan si kale ku ciqaabnaa.
“Ugu yaraan xushmee nafta Jamal, sababtoo ah dhib badan ayuu u soo maray xorriyadda hadalka.”
Starmer ‘oo aad uga walaacsan’ la wareegidda
Keir Starmer, oo ah hoggaamiyaha xisbiga Labour-ka, ayaa sheegay “inuu aad uga walaacsan yahay” la wareegidda Newcastle ee uu Sacuudigu gadaal ka riixayo wuxuuna carrabka ku adkeeyay baahida loo qabo maamul madax bannaan si loo hagaajiyo maamulka kubadda cagta.
“Tracey Crouch, oo ah xildhibaan Tory ka soo jeeda, ayaa qiimeyn ku sameeyay maamulka kubadda cagta – taas ayuuna ka tusaale qaadaneynaa, balse waxaan ka walaacsanahay maamulka,” ayuu yiri.
“Waxaan filayaa waxaan u baahannahay maamul madax bannaan – waxaanu tan ku aragnay naadiyo badan haatan sanadkii ama labadii sano ee la soo dhaafay – waxaan u baahannahay maamul madax bannaan.”
Wuxuu intaas raaciyay: “Waxaan u maleynayaa inay tahay in maamul madax bannaan la hoos geeyo sababtoo ah waxaa jira walaac daran oo laga qabo taariikhda xuquuqda aadanaha.
“Aad ayaan uga walaacsanahay la wareegiddan.”
Maxaa ku dhacay Jamal Khashooqji?
Wali ma cadda. Balse Mr Khashoggi ayaa markii cid ugu war dambaysay galay qunsuliyadda Sacuudiga Istanbul 2-dii October sanadkii 2018, si uu ugas oo qaato warqado u oggolaanaya in uu guursado gabadhii u doonanayd ee Hatice Cengiz.
Saraakiisha Turkiga ayaa rumaysan in Khashooqji ay qunsuliyadda ku dhex dileen koox katirsan sirdoonka Sucuudiga, oo ay maydkiisiina meesha ka saareen.
Sucuudi Carabiya ayaa beenisay eedaymahaas, waxayn ugu horrayntii ku adkaysatay in Khashooqji uu safaaradda ka baxay asagoo xor ah.
Previous articleDhalinyarada beesha Cayr ee degta magaaooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb oo Xamar baaq ka soo saaray..
Next articleMaleeshiyaadka Ahlusunna oo saacadihii la soo dhaafay ciidamo fara badan geeyay degaanka Bohol oo dhanka waqooyi Dhuusamareeb
Dilka loo geystay xildhibaan Sir David Amess oo u dhashay Britain ayaa muujinayaa jahwareerka amni ee soo wajahay guud ahaan siyaasiyiinta caalamka. Haddaba, sidee siyaasiyiinta...